201 သံမဏိ slotted ပိုက်
201 သံမဏိဂဟေ Rectangular သွယ်တန်းထားသောပိုက်
201 သံမဏိဂဟေက Round သွယ်တန်းထားသောပိုက်
201 သံမဏိအထူး Shape သွယ်တန်းထားသောပိုက် welded
201 သံမဏိဂဟေ Square ကိုသွယ်တန်းထားသောပိုက်
304 သံမဏိ slotted ပိုက်
304 သံမဏိဂဟေ Rectangular သွယ်တန်းထားသောပိုက်
304 သံမဏိဂဟေက Round သွယ်တန်းထားသောပိုက်
304 သံမဏိအထူး Shape သွယ်တန်းထားသောပိုက် welded
304 သံမဏိဂဟေ Square ကိုသွယ်တန်းထားသောပိုက်
316L ကိုသံမဏိဂဟေ Rectangular သွယ်တန်းထားသောပိုက်
316L ကိုသံမဏိဂဟေက Round သွယ်တန်းထားသောပိုက်
316L ကိုသံမဏိဂဟေ Square ကိုသွယ်တန်းထားသောပိုက်
အက်စ်အက်စ် rectangular ဂဟေပြွန်
အက်စ်အက်စ်ရင်ပြင် Welded Tube
Flat ဘဲဥပုံနှင့်ဘဲဥပုံ ss ပိုက်
ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူသံမဏိ slotted ပိုက်
ကြီးမားသောအချင်းနှင့်အတူစက်မှုထူ - မြို့ရိုးကို ss ကိုပြွန်
Foshan Jinsuiying သံမဏိပစ္စည်း Co. ,,.Ltd မှ
နံပါတ် ၁、2、3、3က,လုပ်ကွက် ၂၊ အီးဇုန်,Liyuan Metal Logistics Mall,Fochen လမ်း,Chencun,Shunde ခရိုင်,ဖိုရှန်,ဂွမ်ဒေါင်း,တရုတ်
စက်ရုံ:No.89 အနောက် Gaoming ရိပ်သာလမ်း,Mingcheng မြို့,Gaoming ခရိုင်, FOSHAN, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
သံမဏိဂဟေက Round သွယ်တန်းထားသောပိုက် 201 Decoration များအတွက်
Product Details Product name Stainless Steel Welded Round Pipes 201 For Decoration Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material…
Product Details Product name 201 Mirror Polished Stainless Steel Round Pipes Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201…
Product Details Product name ASTM A554 Stainless Steel Round Pipes 201 Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201…
hot-ရောင်းချသံမဏိက Round Tube 201
Product Details Product name Hot-sale Stainless Steel Round Tube 201 Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201 Port…
ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရသံမဏိက Round Tube 201
Product Details Product name Thin Wall Stainless Steel Round Tube 201 Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201…
Stainless Steel Round Tube 201 ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်
Product Details Product name Stainless Steel Round Tube 201 For Construction Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201…
Product Details Product name Small Diameter Stainless Steel Round Pipes 201 Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201…
Product Details Product name Large Diameter Stainless Steel Round Pipes 201 Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201…
သံမဏိ Square ကိုသွယ်တန်းထားသောပိုက် 201 ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်
Product Details Product name Stainless Steel Square Pipes 201 For Construction Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 201…
Big ချင်းနှင့်ထူထပ်သောက Round သွယ်တန်းထားသောပိုက် 530mm、426မီလီမီတာ、325မီလီမီတာ
Basic Details Product name Big Diameter and Thick Round Pipes 530mm、426မီလီမီတာ、325mm Place of Origin Guangdong, တရုတ်(ပြည်မကြီး) Certification ISO TUV LRQA Standard AISI, ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ, IN, GB Supply Ability 100Ton/Tons per day stainless steel welded pipes Packaging Details Each pipe is wrapped inapoly bag or customized Stainless Steel Material 304/201…
E-mail ကို: susan@jinsuiying.com
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း,နမူနာ & ကိုးကား,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Foshan Jinsuiying သံမဏိပစ္စည်း Co. ,,.Ltd © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုအရင်ဖြည့ ်၍ download လုပ်ပါ